कोरोना कहरः विश्व महामारीबाट हामीले के सिक्न जरुरी छ ? - Everest Talk
कोरोना कहरः विश्व महामारीबाट हामीले के सिक्न जरुरी छ ?1 min read
२०७६, २२ चैत्र शनिबार १२:५७
चैत २२, काठमाडौं
लेखक : मोहन आचार्य
यो लेख लेख्दै गर्दा संसारमा आतंक मच्चाउदै रफ्तारमा फैलिदै गरेको कोरोनाभाइरसले कति बिध्वङ्गस गर्ने हो, अकल्पनीय छ । नेपालको मित्रराष्ट्र अमेरिका कोरोनाभाइरसको नयाँ एपिसेन्टर रुपमा देखापरेको छ ।
कोरोनाको महामारी चीनहुँदै संसारका २०४ राष्ट्रमा फैलिसकेको रिपोर्ट छ । सुरुवाती चरणमा चीनको वुहानमा यसको पहिचान, रोकथाम र गम्भीरतामा अलमल र गोपनियतामा सवाल उठे पनि जून रुपमा चीनले राष्ट्रिय संकट घोषणा गर्दै आफ्नो पुरा ताकत लगाएर युद्धको घोषणा गर्दै कोरोना विरुद्ध जाइलाग्यो, त्यो अन्य राष्ट्का लागि उदाहरणीय ठहरियो । उसको यस कदमले जनस्वास्थ्यप्रति राष्ट्रिय गाम्भिरतालाइ दर्शाउछ । त्यहाँको सरकार आफ्नो उच्चतम प्रबिधि, जनशक्ति र ऊर्जा लगाउदै करोडौं जनतालाई सुरक्षित राख्न तत्काल लकडाउन गर्ने निर्णय लियो । एकपछि अर्को संक्रमितको पहिचान गर्दै आइसोलेट गर्दै गयो । केहिदिन भित्रमै संसारले पत्याउनै नसक्ने गरि प्रति एक हजार बेडका दुईटा आकस्मिक आस्पताल बनायो । होटेल, स्कुल, जिमहल, रंगशाला, खेलस्थल लगायतलाई आइसोलेशन केन्द्रमा परिणत गर्यो । परिक्षण, पहिचान र अलग्याउने रणनीति अन्तर्गत पचासौ हजार संक्रमीतलाई निगरानी र उपचारमा राख्यो । सिंगो सहरलाई दैनिक खानपान लगायात सम्पूर्ण अतिआवश्यक सामग्री सप्लाइको एउटा नमुना सप्लाई चेनमार्फत पुर्यायो । पश्चिमा जगतका कतिपय आलोचना खेप्दै आफ्नो क्षमताको उपयोग गर्दै करीब दुई महिनमा कोरोनालाई नियन्त्रणको चरणमा पुर्यायो ।
संक्रमणको क्षेत्र र संक्रमितलाई अलग्याउन पूर्ण लकडाउनको पृथक प्रयोग गर्दा आलोचकले प्रश्न तेर्स्याए ! अधिकार र व्यक्ति स्वतन्त्रताको पुराणसम्म सुनाउन भ्याए, कतिपय पश्चिमा मिडियाले । यद्यपि यो बहसको विषय हुनसक्छ, कति जायज कति कठोर ? समयले निर्क्योल गर्ला अती थियो कि आवस्यकता !! तर एउटा प्रारम्भिक परिदृस्य खुल्दैगएको छ ।
यो लेख तयार गर्दै गर्दा एउटा समाचार आयो, अस्ट्रेलियाको न्युसाउथ वेल्स राज्यमा ९० दिनको लोकडाउन गरिएको छ, र नियम तोड्नेलाइ तत्काल १००० अस्ट्रेलियन डलर र अधिकतम ११००० डलर जारिवाना र ६ महिना कैद सजाय तोकिएको छ । यो एउटा उदाहरण हो महामारिबाट जनताको जिवनरक्षाको लागि विभिन्न राष्ट्रले चलिरहेका आकस्मिक कदमको।
यो समाचार आउदासम्म संसारका एक तिहाईभन्दा बढी जनसंख्या पूर्णत लकडाउनमा छन् । संसारको दोश्रो ठुलो आवादी भएको देशका करिब १३५ करोड जनता २१ दिनका लागि पूर्ण लकडाउनमा छन् । इटाली, स्पेन , जर्मनी , फ्रान्स , बेलायतलगायत अधिकांश युरोप लकडाउनमा छ ।
न्युयोर्क टाइम्सकानुसार अमेरिकामा पहिलो घोषित कोरना संक्रमण २१ जनवरीमा देखिएको हो । चीनमा ३१ डिसेम्बरमा आज्ञात कारणले नेमोनियाका बिरामी देखिए, ११ जनवरीमा पहिलो मृत्यु भाइरसका कारणले भएको रिपोर्ट छ । ३० जनवरीमा डब्लुएचओले ग्लोबल हेल्थ एमरजेंसी (ग्लोबल प्यानडेमिक घोषित- ११ मार्च २०२० ) मा घोसना गर्यो ।
कोविद १९ एउटा यस्तो महामारीको त्रासदी बोकेर आएको छ उपल्लो स्वास्थ्य सेवा भएका भनिएका देश पनि हायलकायल हुँदै संकटपूर्ण अवस्थामा छन् ।
गल्ति कहाँ भयो?
उदेकलाग्दो परिदृश्य कहाँ छ भने, लगभग उही समयमा संक्रमणको घटना बाहिर आउदा हंगकंग, सिङगापूर, थाईल्याण्डलगायतका देशहरु सतर्क हुँदै लकडाउनसम्म पुगे । तर धेरै जसो युरोपियन रास्ट्रहरु सोहि समयमा कोरोनालाइ नजरअन्दाज़ गर्दै थिए । इटालीमा थुप्रै संख्यामा संक्रमित भेटिएको थाहा हुँदाहुँदै रंगशालामा फुटबल खेलिरहे । च्याम्पियन्स लिग आन्तर्गतको एटलान्टा र भयालेंसियाबीच इटालीको मिलानमा १९ फेब्रुअरीमा ४०००० दर्शक माझ खेलिएको फुटबल म्याच युरोपमा जैविक बम जसरि कोरोना भाइरसको बिस्फोट भयो । फुटबल हेर्न आएका करिब २५०० भ्यालेन्सिया समर्थकले कोरोना स्पेन पुर्याए र अहिले युरोपले भोगिरहेको कोरोना पिडाको एपिसेन्टर यही घटनालाई मानिन्छ ।
यस घटना पस्चात पनि संक्रमित हुनेको रिपोर्ट आइरहेको थियो , चीनको वुहानमा कोरोना बिस्फोटको समाचार आइरहेका थिए । तर मानिसहरु पार्टी गरिरहे,पबक्लब र समुन्द्री किनारमा मस्ती गरिरहे । राजनीतिक कार्यक्रम रोकिएनन, बरु नेताहरु गाला जोडेर कोरोनाको चर्चा गर्थे र हल्का टिप्पणी गर्थे । यी लापर्वाहिका प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् जसको मूल्य अहिले युरोपले चुकाइरहेको छ ।
पर्याप्त समय हुँदाहुँदै पनि यस्तै अटेरीपन अमिरिकी नेतृत्वमा देखियो । जनता पनि के कम, १००० माथि संक्रमीतको संख्या पुगे पनि न्युयोर्कमा गाडीको ताती थियो, पब र बार चलिरहे ,अबेर रातिसम्म पार्टी भैरहे ,समुन्द्री किनारमा हजारौको भीड देखिरह्यो । यही अवस्था अमेरिकाका अन्य राज्यमा पनि रहिरहयो । उच्च तहमा कोरोनाप्रतिको धारणा बिवादित र समस्या ग्रस्त थिए । कोरोना महामारीलाई बुझ्न र बुझाउन ट्रम्प प्रशासन र विभिन्न राज्य बीच बिवाद रहिरह्यो । पर्याप्त समय हुँदाहुँदै अमेरिकी प्रशासन के हेरेर बस्यो ? चीन, दक्षिण कोरिया र जापान जसरि महामारिप्रती सतर्कता देखाएन । कोरोना भाइरसको आंकलन, निम्तिन सक्ने स्वास्थ्य गाम्भिरता र तत्काल लिनुपर्ने निर्णय क्षमतामा निकै सुस्त र हल्का प्रतिक्रिया देखायो । ट्रम्प प्रशासन विश्वको महाशक्ति राष्ट्र र त्यहाँका उत्तरआधुनिक जीवनशैली भएका जनताको गरिमा कायम राख्न असफल देखिदैछ । विश्वले उसबाट आपेक्षा गरिएको महामारी नियन्त्रणको सहयोगको कुरा छोडौं, अत्यन्त कठिन चरणमा गुज्रिएका न्युयोर्कबासीहरुको जिवनको बेवास्ता गर्दैछ ।
यो उसले जानी जानी देखाएको उदारवादी सिद्दान्तको आडम्बर हो कि खसस्किदै गएको ट्रम्प प्रसासनको कार्यक्षमता हो, अब छिटै देखिनेछ । ट्रम्प प्रसासन प्तिको बढ्दो दबाब र जनताको वितृष्णा र नैराश्यता अब अमेरिकी प्रसासनलाई ढाकछोप गर्न बाहिरी संसार विशेस गरि चीनको विरुद्धमा हिलो छयाप्ने काममा लागेको छ, तर यो उदांगो हुन अब धेरै समय लाग्ने देखिदैन । यो पंक्तिहहरू लेख्दै गर्दा सीएनएन को विशेष कार्यक्रममा अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले चीनले कोरोना संक्रमणको ढिलो जानकारी दिएको आरोप लगएका थिए । आफ्नो पर्दाफास वा कमजोरी लुकाउन ध्यान अन्यत्रै मोड्ने चलिआएको अमेरिकी कन्स्पिरेसी थ्योरी यसपटक थोत्रो साबित होला जस्तो छ ।
न्युयोर्कका गभर्नरको सहयोगको कारुणिक याचना हामी सात समुन्द्र टाढाबाट बुझ्दैछौ, तर ट्रम्प प्रशासन मृत्यु हुने सम्भावित संख्या घोषणा गरेर बस्या छ । उसको यो हदको निरीहता अमेरिकी जनता र पुरै विश्वले पहिले सायदै महसुस गरेका थिए। चुलिदै गएको संक्रमितको संख्या र मृत्यु दरको संख्याको जवाफमा ट्रम्प भन्छन अरु देशले डाटा लुकाए ।
विश्वको सामरिक र आर्थिक महाशक्ति राष्ट्रका प्रमुखको यो जवाफ अपत्यारिलो,असहज र अनुमान विपरित छ । यही दोषारोपणलाइ संकेत गर्दै डब्लुएओं चिफ टेड्रोस अदनामले भने- “हाम्रो सबैभन्दा ठुलो सत्रु आफैमा कोरोना भाइरस होइन, बरु हामीलाई एकअर्का विरुद्ध उभ्याउने कलंकित दोषारोपण हो ।” विश्वको नेतृत्व गर्ने राष्ट्र र त्यसका मुखियाको परिक्षण यस्ता महामारी र संकटमै हुन्छ । फराकिलो छाती र तागतको अमेरिकी गरिमाको लेखाजोखा त दुनियाले गर्ने छ नै, तर अमेरिकी जनता आफैले यो संकटबाट उम्कनेछन र आत्ममूल्यांकन गर्दै दरिलो नेतृत्वको चयन गर्नेछ।
दुर्भाग्य भनौ ! छिमेकी भारतमा दिल्लीस्थित इस्लाम तब्लिघी जमातको मुख्यालय मर्कराज़ निज़मुदीनमा करिब २००० को धार्मिक कार्यक्रममा सहभागी करीब ४०० मा हालसम्म कोरोन टेस्ट पोजेटीभ देखिएको छ र दर्जनौको मृत्यु भइसकेको छ । भारतभर सम्पूर्ण लकडाउन गरेको केही दिनपछि दसौं हजार मजदुरको मुख्य सहरबाट पलाएन पनि निकै अत्यासलाग्दो थियो। यी दुवै घटनाले कति क्षति पुर्याउने हो अहिले नै भन्न त सकिन्न तर भारतमा ठुलो हड्कंप मचिएको छ ।
एउटा संयोग भनौ, सिल्विया ब्राउनिले २००८ मा प्रकासित आफ्नो पुस्तक “एंड अफ डेज- प्रेडीक्सन एंड प्रोफेसिएस” ( पेज ३१२ दोश्रो अनुक्षेद ) मा उल्लेख गरिकी थिइन कि सन् २०२० मा निमोनियाजस्तै देखिने र सबै स्थापित उपचार पद्दतिलाइ चुनौती दिने एउटा रोग संसारमा फैलिने छ, जसले फोक्सो र स्वासनलीलाई आक्रमण गर्छ । यो त एउटा आपवाद मात्र होला । संकट बाजा बजाएर आउदैन ।
स्टेभन काइरोसले भनेका छन् “जब संकटको प्रवेस हुन्छ तब त्यससंग जुध्ने तयारि समय खुस्किसकेको हुन्छ ।” त्यसैले भनिन्छ, रोगको उपचारभन्दा रोगथाम उत्तम उपाय हो । कोरोना महामारी रोक्न यो मन्त्रको उपयोगिता अझ टड्कारो रुपमा देखिएको छ । आपतकाल र महामारीमा बचत संस्कृति तत्कालिन संकट मोचक हुनसक्छ । यस्तै पूर्वीय सभ्यताका, बिशेषगरि हिन्दु संस्कारका आचरण निकै बैज्ञानिक छन् भन्ने यस महामारीले प्रमाणित गर्दैछ । निश्चित दुरीमा रहेर नमस्कार गर्नु , शुद्द मसला, जडिबुटी र योगले रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउनु, जुठो नखानु , भान्सा र शौचालय बिचको दुरी कायम राख्नु , खराब संसर्ग नराख्नु ,अनाजको प्राकृतिक स्वरुपलाई नबिगार्नु , बनस्पति र जीवको अधिक दोहन नगर्नु जस्ता हाम्रा बैज्ञानिक दर्शन ग्रहणयोग्य थिए भन्ने प्रमाणित हुँदैछ । पहिले खानाको डेफिशियांसी ( Deficiency ) रोगको प्रमुख कारक हुन्थ्यो अहिले डीफेक्त ( Defect ) प्रमुख कारक हो रोग को ! हेक्का रहोस । पहिले कुपोषण हुन्थियो गारिबलाइ अहिले कुलत छ धनीलाई । कुपोषण आनाजको आभावमा हुन्छ कुलत आनाजको अधिक दोहनमा हुन्छ । अब सोच्ने बेला आएको छ ।
महामारि र संकटसंग लड्न मभन्दा हामी र हामीभन्दा पनि सबै यानिकि सामाजिक एकता अधिक बलशाली हुनसक्छ । सामाजिक संरचनामा व्यक्ति प्रधान स्वत्रन्त्रताभन्दा पनि जिम्मेवार व्यक्ति र सशक्त सामाजिक बन्धनले जोखिमसंग लड्न सक्ने सामर्थ्य बढी राख्छ । मानिसको आदिम र प्रकितिक संरचना नै सामुहिक हित र भावनासंग जोडिएको थियो । पछि सो बन्धन कमजोर बन्दै कानूनद्वारा निर्देशित गठबन्धनजस्तो भयो । व्यक्ति र उसको स्वतन्त्रता समाज बिमुख र फरक हुँदै गए । यसले सामुहिक भावना र सहयोग कमजोर बन्दै गयो । यस महामारीले एउटा संदेश दिदैछ, जुन राष्ट्र बल र कानूनभन्दा पनि तल्लोतहबाटै सामाजिक भावनासहित पूर्वाधारमा सम्पन्न हुन्छ त्यो संकटमा असली ताकतवर हुन्छ । युएन ,विश्व बैंक र आइएमएफले चेतावनी दिएसकेका छन् कि विकसित मुलुकमा आर्थिक मन्दीसंगै बेरोजगारी दर कहाँली लाग्दो रुपमा बढ्ने छ | र आल्पविकसित राष्ट्रहरु थप गरिबीको चपेटामा पर्नेछन् । खाद्यान्न अभाव हुनेछ ।त्यसैले प्राकृतिक दोहन नगरी श्रोत र ऊर्जाको विवेकशील प्रयोगबाट उदाउदा अर्थ व्यवस्थाले दिगो र सुरक्षित विकाशमा ध्यान दिनुपर्छ ।
एसियाका आल्पबिकसित क्षेत्रले ऊत्पादनमा आधारित आफ्नै स्वतन्त्र बजार र स्वाधीन अर्थ व्यवस्था निर्माण गर्न सक्नेछन् ।आक्रामक बाहिरि सट्टा बजार भन्दा जनजीवन,स्वाथ्य र सुरक्षा लाइ मध्यनजर गरी दिगो अर्थतंत्रलाई जोड दिनु जरुरि छ। अब शक्ति र विकाशको मापकहरुमा स्वास्थ सुरक्षा पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । जनस्वास्थ्य सुरक्षाको पुर्व तयारी र रोकथामका नीतिहरु राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दा बन्नु पर्छ ।
(लेखक स्वास्थ्यसम्बन्धि अग्रणी प्रकाशन “समिक्षा पब्लिकेशनका” सिइओ हुन् |)
Tags: कोरोना महामारीमोहन आचार्यसमिक्षा पब्लिकेशन